Abaqulunqi bahlinzeka ngemfashini entsha yexesha lebusika leengubo ze-2011-2012. Babonisa ububele obukhulu kubo. Eyona nto iyona iya kuthathwa njengeemfashini eziphathekayo zasebusika ezivela kwi-knitted or crocheted.
Isigwebo esinobugwenxa senziwe ngabaqulunqi befestile abangenalo ingubo egqobileyo ngexesha lebusika, umfazi akanakucingwa njengento epheleleyo. Ngoko ke uhlobo luni lweengubo luya kuthathwa njengento efakelwayo ebusika ka-2011-2012? Ziziphi izinto ezifanele ukukwazi ngokufanelekileyo ukukhetha iimpahla zokubusika ezifanelekileyo zentshintshi? Ngexesha elifanayo, yintoni umbala wokugqoka, ubhekwe ubusika, kufuneka ukhethe okukhethayo?
Khetha izigqoko zasebusika eziphathekayo ezifudumeleyo: ukusuka kwi-chiffon, okanye kwi-velvet, okanye kwezinye izinto ezibonakalayo ezikhanyayo. Nangona kubeni ebusika kunokukhetha ukunxiba ingubo ephoqelekileyo, oku akuthethi ukuba akufanele ukhangele iingubo ezifake imfashini esele zifanelekile kwiqela. Ingubo yengubo enjalo ingabanjwa kwaye ikhululekile.
Sifaka ikhwelo . Phantse zonke iingubo zasebusika zonyaka we-2011-2012, apho inqweno ibonisa khona ngenye indlela, iyakwazi ukuvumela amantombazana ukuba azive ezintle. Emva koko, abaninzi abantu banengcamango yokuba bakwazi ukukhusela isidalwa esinokukhubazeka, esizifumanayo kweso sigqoko. Ingubo ikulungele ukukhetha ngobude emadolweni okanye ngaphantsi kweendolo. Akuyimfuneko ukukhetha kuphela imodeli yokugqoka yasebusika efanelekileyo, unokuthenga kuphela ibhande elininzi onokuyenza umfanekiso walo. Eyona nto ifanathayo iya kuthathwa njengeebhanti ezinqabileyo, ezenziwe ngesikhumba okanye ubomvu. Inguqu efanelekileyo yengubo yohlwaya iya kuba yinkathazo encinane kunye ne-office dress-case. Mfuneko nje ukumbathisa i-turtleneck ebonakalayo ebonakalayo, okanye i-blouse, ekhetha ixesha eliqhelekileyo, khetha iibhande kunye nesicatshulwa esingavamile.
Mayelana neengubo-sarafan . I-trendy fashionable kwixesha lezambatho zasebusika zika-2011-2012 ziya kuba kwiindawo ezahlukeneyo zokugqoka i-sarafan. Ngokuqhelekileyo le ngubo igqityiweyo. Kufanelekile ukuba uqaphele abafazi befestile abagqibe ukuthenga ingubo enjalo: bembethe ngokukhethekileyo nge-turtleneck efudumele okanye i-blouse. Ngokwemvelo, ukuba ufuna ukugqoka i-turtleneck phantsi kweengubo zakho, kufuneka ugube i sweatshi phezu kwako konke oku. Ukuba ufuna, unokugxininisa uhlobo oluthile lokunganaki kwesitayela, okanye umfanekiso ongenangqondo, kodwa ungagqithisi ukwenzela ukuba ungabonakali iimpazamo zakho. Kufuneka nje ubeke ilanga elincinci kodwa elincinci, okanye iiglavu zesikhumba okanye i-leggings ngeesokisi ezifudumeleyo. Ukukhetha loo ndoda yokugqoka kungcono ukudibana nabahlobo, kodwa ukuba unqwenela, ngoncedo lweengcamango kunokwenzeka kwaye kwindibano.
Imikhono emfutshane . Ziyakwamkeleka nakwiindawo zokugqoka zasebusika ngeli xesha. Iingubo ezinjalo zinokugqithiselwa umsebenzi kunye neeholide, ngokukodwa, ngoNyaka omtsha. Ukwenza kube lula ngakumbi ungasebenzisa iimbalo ezilula ezingaba yinkxaso ehlukeneyo. Inqabileyo yokukhetha imihla ngemihla iya kuba yembatho yasebusika kunye neefreklakes zekhephu, ezifanelekileyo kwaye zonyaka. Iimpawu zeScandinavian ziya kubonakala zilungile nakwiyiphi na intokazi enhle. Unokwenza nje uthabathe umbala webusika owodwa, kodwa ukhanyisa kakhulu. Akuyi kuphinda kufuneke ukuhlobisa ngazo naziphi na izesekeli. Kwanele nje ukuba "wenze" i-hairstyle engavamile kwaye ugqoke iillywood zokuthakazelisa, zangaphambili.
Kwi mibala ephezulu. "Amagunya" phakathi kwazo zonke iifolda zokuqokelela kwebusika ziza kuba zilandelayo: i-beige, ibhontshisi, imibala ye-terracotta kunye nemibala yazo. Ngamafutshane, imibala efudumeleyo. Kodwa abenzi bokuzicwangcisi abalibali ezi shades ezicacileyo njenge-blue, violet, i-turquoise, i-yellow-orange, ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka nokunye. Ngoko musa ukuhlala kwiimpahla eziqhelekileyo ezimnyama kunye ezimhlophe. Nangona ummeli ngamnye, abafazi bezinto ezikhethiweyo zefashoni, bathanda.
Kwiqumrhu . Intombazana isoloko ilukhuni ukukhetha i-intanethi yeqela elithile, njengoko kufanelekile, kodwa ihlakaniphile. Kwimeko enjalo, unokukucebisa ukuba ukhethe unonophonic, okanye u-satin, ugqoke ngokugqithiseleyo kunye nomnxantathu. Akudingeki ukuba uyihlobise, unokwenza nje ubeke umgca omncinci. Kwaye kunye namantombazana angesabi ukuba avele ahlambulukile, unako ukugqoka i-pantyhose kwi-mesh.
Kwaye ukuya kwindawo yokudlala unokhetho olude olufana nalolu hlobo, kodwa ngexesha elifanayo ukuyihlobisa ngempahla yefashoni.
Iimpawu zeentyatyambo. Ngoku, njengangaphambili, i-motifs yezimbali sele ihamba ngendlela kwaye ifanelekile. Abaqulunqi befestile abadumileyo baye bamangalisa uluntu lwabo oluninzi ngeengubo ezide kunye neendwangu zeentyatyambo eziqhakazileyo, phakathi kwazo apho umntu ebona khona ukumangaliswa kwelizwe kunye neRising Sun. Iimpawu ezinjalo zaseJapane azibonakali nje ngeemifanekiso ezifaliweyo, kodwa nazo zihlukileyo. Phantse zonke iingubo ezivela kwindlela yokuqokelela iifowuni zokugqoka zasebusika zigxininisa ubufazi, inqunu yabanini babo, kwaye ubude babo bufikelela ezintendeni. Abaqambi banquma ukukhetha amathenda e-satin kunye ne-velvet, kwaye ezo zindwangu zihamba ukusuka kwelinye ukuya kwelinye kwinto efanayo. Izambatho zanikezwa ngaphandle kwemikhono, ikakhulukazi i-cocktail shades.
I-swan cream . Ngaloo ndlela, izandi ezithakazelisayo zenziwa eParis, umyili wazo owazibiza ngokuba yizinyoni ezingaqhelekanga zeparadesi. Phakathi kwabo unako ukugcina iimpahla ezingenangqiqo apho imilenze okanye isifuba esicacisiwe. Iimpawu eziluhlaza kunye nezibomvu zengubo ezinjalo zanikezela ngolu hlobo lokuba imizekelo inikwe ngohlobo lwabafazi. Umculi wayefuna ukugxininisa kwimifuno yabo ngokuzithe tye ngokukodwa kwindoda yabasetyhini kunye nemvelo ngokwesini.
Ndiyathemba ukuba unako ukuthabatha isetyhini, kodwa ngelo xesha unxibe iimpahla zokubanda zasebusika.
Bona kwakhona: Izitayela ezingenamikhono ezingenamikhono kwengubo
Ukujikeleza okuphathekayo: iingubo ezintle zekwindla nobusika 2016-2017
Iinjongo zangaphakathi - i-summer trend-2016
Intombi yeCowboy: Yintoni enxiba ngayo ijee kule nkwenkwezi
Imfashini yefestile yamashumi asixhenxe
Iingqayi - umendo-2016: inxenye I
Umthwalo wayo: okokugqoka kwintwasahlobo ka-2016. Iifoto zemifanekiso eqaqambileyo
Ziziphi i-estrogens, kwaye ziphi ukutya?
UDkt. ULisa wayephakathi kwalawa abulawe kwinqwelo lokuhamba kweendiza eSochi
Zingaphi iminyaka ukunika umntwana ukuba adlale?
Ukunakekelwa kwebele kwasekhaya
UVictoria Bonya wabonisa isithombe esitsha kunye nomntu ohlakaniphile
I-Apple cocktail kunye nama-peaches
Squids kwindlela yaseMexico
Indlela yokuchitha umtshato ongenakuthelekiswa
Iprojekthi yokwakha yekhitshi encinane